Meizu 18 nwere ụbọchị mwepụta wee pụta na onyonyo | Gam akporosis
Meizu 18 enweela ụbọchị ntọhapụ: nke a bụ ihe igwe nwere ihu mebiri emebi yiri
N’oge na-adịghị anya, anyị ga-anabata gị na usoro ndị ọzọ nke Meizu flagship smartphones, nke a ga-ebido na March 3 na-abịa n’obodo ya nke China. A ga - eme nke a, dịka atụmanya, site na ụdị abụọ, nke bụ Meizu 18 na Meizu 18 Pro.
Companylọ ọrụ ahụ gosipụtara akwụkwọ mmado mara mma nke gosipụtara ngwaọrụ abụọ ahụ, nwere ihe osise doro anya nke gosipụtara atụmatụ nke ọ bụla. N'okwu abụọ ahụ, anyị na-ahụkwa otu ọdịdị.
Kedu ihe a maara banyere Meizu 18?
Onye na-emepụta ekwentị ebipụtala akwụkwọ mgbasa ozi na-egosi Meizu 18 na Meizu 18 Pro. N'ime ihe a anyị enweghị ike ịhụ ihu azụ nke igwegharị ndị a, mana anyị nwere ike ịhụ atụmatụ dị n'ihu na ha na-etu ọnụ. N'aka nke ya, ị ga - ahụ oghere maka igwefoto selfie nke na - adịghị n'akụkụ nkuku, kama na etiti etiti ihuenyo ahụ. Ya mere, o doro anya na ụlọ ọrụ ahụ agaghị ahọrọ ihe mmetụta selfie abụọ.
Ihe ọzọ bụ na ma onye ma nke ozo ga - enwe ihe omuma ihe ntinye aka n’uwa. Ihe dị iche nha n’etiti ha abụọ pụtakwara, ebe Meizu 18 dị obere karịa nwanne ya nwoke nke okenye.
Featuresfọdụ atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ depụtara na ọnwa ndị na-adịbeghị anya na-egosi ojiji nke ihu igwe AMOLED na mkpebi FullHD + na ọnụọgụ ume 120 Hz. Na mgbakwunye, Meizu 18 ga-abịa na Snapdragon 870 Qualcomm, mgbe Snapdragon 888 A ga-edebe ya maka Meizu 18 Pro, na-eme nke ikpeazụ ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ kachasị elu nke ụlọ ọrụ ahụ.
A ga-ahụkwa batrị nwere ikike kachasị elu nke 4.500 mAh na nke ikpeazụ na teknụzụ na-ebu ọnụ ngwa ngwa nke 40 W. N'ikpeazụ, a kwuola na ọ ga-abịa na igwefoto igwefoto quad azụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Meizu 18 enweela ụbọchị ntọhapụ: nke a bụ ihe igwe nwere ihu mebiri emebi yiri
Nubia Red Magic 6 ga-abata na ihuenyo nwere ọnụego ume ọhụrụ karịa 144 Hz